आईसीयूमा राखेर प्रधानमन्त्रीको गोप्य रुपमा डायलाइसिस ! – खबर खुराक
Home > Uncategorized > आईसीयूमा राखेर प्रधानमन्त्रीको गोप्य रुपमा डायलाइसिस !
१४ कार्तिक २०७६, बिहीबार ०७:०२
काठमाडौँ, १४ कात्तिक । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको धापासीस्थित ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा ‘डायलाइसिस’ गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई बुधबार बिहान नियमित परीक्षणका लागि लगिएको बताइए पनि आईसीयूमा राखेर गोप्य रूपमा डायलाइसिस गरिएको उच्च स्रोतले कान्तिपुरलाई जानकारी दियो ।
‘एन्टीबडी’ भनेको शरीरलाई बाहिरी तत्त्वबाट जोगाउन उत्पादन गरिने एक प्रकारको लडाकु कोष हो । चिकित्सकका अनुसार १२ वर्षअघि मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएका प्रधानमन्त्रीको शरीरमा एन्टीबडी घटाउन प्लाज्माफेरेसिस गरिनु सामान्य प्रक्रिया नै थियो ।
प्लाज्माफेरेसिस पद्धतिमा शरीरबाट रगतलाई नलीको माध्यमबाट ‘एफेरेसिस’ मेसिनमा पठाइन्छ । मेसिनले धेरै मात्रामा रहेको एन्टीबडी निकालेर रगत पुनः शरीरमै पठाउँछ । एन्टीबडी फेरि बढ्न नदिन केही औषधि दिइन्छ । त्यो औषधिले राम्रो काम गरे तत्काललाई मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्दैन । तर, एन्टीबडी उत्पादन नियन्त्रण नभए प्रत्यारोपणको विकल्प हुँदैन । उक्त औषधिले कहिलेकाहीँ सकारात्मक असर देखाउँछ भने कहिले थप जटिलता पनि निम्त्याउन सक्ने चिकित्सकको भनाइ छ ।
सामान्यतया मिर्गौलाले पूर्ण रूपमा काम गर्न छोडे हप्ताको ३ पटकसम्म अस्पतालमै लगेर डायलाइसिस गरिन्छ । एकपटक डायलाइसिस गर्न करिब ४ घण्टा लाग्छ । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा स्वरुप आचार्य र अतुल मिश्रले लेखेका छन् ।
प्रकाशित मिति: १४ कार्तिक २०७६, बिहीबार ०७:०२
Posted in UncategorizedTagged यथार्थ जानकारी लुकाउने प्रयास
Previous: आज देखि छठ पर्वकाे रौनक सुरु ? यस्ता छन् मुख्य विधि
Next: प्रधानमन्त्री ओली र भेनेजुयलाका राष्ट्रपति मदुरोबीचको भेटवार्ता किन गोप्य ?